Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 2, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Matauriro ane hunhu: Mhosho shoma dzekudzivisa!
Tsamba yekuvhara, tsamba yekutenda, e-mail yeunyanzvi… Pane nguva dzisingaverengeki apo matauriro eruremekedzo anoshandiswa, mose mutsamba dzekutungamira uye mumae-mail ehunyanzvi. Nekudaro, kune akawanda matauriro aneruremekedzo ekutaura zvekuti munhu anosanganisira mu e nyanzvi kuti unogona kukurumidza kuwana tangled mabhurashi. Mune batch iyi, isu tacherekedza, kwauri, vashoma vavo vaunofanirwa kurambidza. Zvechokwadi zvinopikisa. Kana iwe uchida kuvandudza kunaka kwemaemail ebhizinesi rako, wauya kunzvimbo chaiyo.
Ndokumbira undipindure kana Ndatenda pachine nguva: Mafomu ekuremekedza ekudzivisa
Hazvina kunaka kufunga kuti kufanotenda mukuru kana mutengi kuchavakurudzira kuti vafarire chikumbiro chedu kana chikumbiro chedu. Asi muchokwadi, tinongotenda chete nebasa rakatoitwa kwete rubatsiro mune ramangwana.
Nepo iwe uri mumamiriro ehunyanzvi, fomula yega yega ine kukosha kwayo uye mafungiro emazwi haafanire kuregeredzwa. Iyo pfungwa ndeyechokwadi kugadzira kuzvipira neanopindirana. Muchiitiko ichi, wadii kushandisa chirevo?
Unogona kushandisa iyi modhi uchiramba uine hunhu. Panzvimbo pekunyora kuti "Ndinokutendai nekundipindura", zviri nani kuti: "Ndapota ndipindure" kana kuti "Ziva kuti unogona kusvika kwandiri pa ...". Iwe une chokwadi chekufunga kuti aya mafomula ane hukasha kana mune bossy toni.
Uye zvakadaro, aya maratidziro anobatika ehuremekedzo anopa hunhu kune anotumira email munzvimbo yehunyanzvi. Izvi zvinopesana nemaemail mazhinji asina shungu kana anoonekwa seanotya zvakanyanya.
VERENGA Tsamba template kukumbira kumberi kana dhipoziti
Mafomura ane ruremekedzo ane maitiro asina kunaka: Sei uchiadzivisa?
"Usazeza kundibata" kana "Tichava nechokwadi chekudzokera kwauri". Aya ese matauriro ane hunhu ane maitiro asina kunaka izvo zvakakosha kurambidza kubva kune yako nyanzvi maemail.
Ichokwadi kuti aya maitiro akanaka. Asi idi rokuti iwo anotaurwa nenzira isina kunaka pane dzimwe nguva anoita kuti apikise. Izvo zvechokwadi zvinoratidzwa neuroscience, uropi hwedu hunowanzo kufuratira negation. Mafomula asina kunaka haatisundidzire kuita chiito uye kazhinji anorema.
Saka, pachinzvimbo chekuti "Usazeze kugadzira account yako", zviri nani kushandisa "Ndapota gadzira account yako" kana "Ziva kuti unogona kugadzira account yako". Zvidzidzo zvakati wandei zvakaratidza kuti mameseji akanaka akagadzirwa nenzira isina kunaka anounza kushomeka kweshanduko.
Neshuviro yekubatanidza vanyori vako mumaemail ehunyanzvi. Iwe unozowana zvakawanda nekusarudza mataurirwo eruremekedzo. Muverengi wako achanzwa aine hanya zvakanyanya nekurudziro yako kana chikumbiro chako.
Matauriro anehuremekedzo ekudzivirira mune email yehunyanzvi Zvita 2nd, 2021Tranquillus
pashureProfessional email, dzivisa zvakajairika mafomula!
zvinoteveraNdeupi mutsara wemutsa unofanirwa kutevedzera "Pending…" chimiro?
Chii chinotsanangura kutya kunyora?
Chinangwa chekuita nekungonyora chete!
Matipi mashanu ekurerutsa mitsara yako